ICALACATTA QUARTZ COUNTERTOPS (ISIKHOKELO SOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi ICalacatta Quartz Countertops (Isikhokelo soYilo)
ICalacatta Quartz Countertops (Isikhokelo soYilo)
Wamkelekile kwigalari yethu yeeCalacatta zetafile zewartz ezintle kubandakanya iintlobo ezidumileyo zoyilo lwakho lwekhitshi.
Imiphezulu yeetafile zecalacatta zenziwe zintle, ziziqwenga zamatye ezizodwa eziza kongeza ukubukeka okuhle ekhitshini, kwigumbi lokuhlambela okanye nakweyiphi na ibha enokucinga. Apha ngezantsi kukho ulwazi ngemibala, amaxabiso kunye nohlobo lwee-countertops ze-quartz zeCalacatta ezifumaneka ngokuxhaphakileyo.
Yintoni iCalacatta Quartz?
ICalacatta Quartz Slab
Nguwuphi umbala weCalacatta quartz?
Ixabiso leCalacatta Quartz
Yimalini i-slab yeCalacatta quartz?
Iindidi ezidumileyo zeCalacatta Quartz
Calacatta Gold zwi
I-Quartz emhlophe yeCalacatta
ICalacatta Laza Quartz
ICalacatta Quartz yakudala
ICalacatta Venice Quartz
ICalacatta Botanica Quartz
ICalacatta Nuvo Quartz
Quartz emhlophe yeCalacatta
UCalacatta Leon Quartz
ICalacatta Verona Quartz
ICalacatta Vicenza Quartz
ICalacatta Ultra Quartz
ICalacatta Trevi Quartz
ICalacatta Roma Quartz
ICalacatta Quartz sisiqwenga someleleyo se-quartz. Ezi ziqwenga ze-quartz zijiyile, zendalo kunye nengxelo entle. ICalacatta Quartz isetyenziswa kakhulu ngenxa yebala kunye neempawu zayo ezinganyangekiyo. I-quartz inezi mpawu kuba inzima kakhulu kwaye ihlala ixesha elide, kwaye kulula ukuyigcina nokukhathalela. Oku kunika ithuba lokusebenzisa le ndawo kwindawo ezininzi, kubandakanya izindlu zangasese, iikhitshi, amagumbi okutyela, njl.
I-quartz yeCalacatta ine-veining eyahlukileyo eyenza ukuba ibe sisiqwenga esahlukileyo nesisebenzayo. I-Calacatta sisiqwenga esimhlophe se-quartz kwaye sinombala ohlaza okwesibhakabhaka ongwevu. Ezinye iintlobo zinee-hues ezahlukileyo kunye neetints kumhlophe, kunye nokubandakanya ezinye ezingwevu ezimdaka xa kuthelekiswa nokupholisa, ukugcoba okuluhlaza okwesibhakabhaka okuqhelekileyo.
Iipateni zemithambo ziyahluka kuhlobo kuhlobo, nokuba ziziqwenga, kuba zonke zisetyenziselwa ukwenza iziqwenga ze-quartz. Ezi zinto zihlala zifana nemabhile ebiza kakhulu ngembonakalo, kodwa iseyimpahla ye-quartz.
Sebenzisa islabha esinye seCalacatta Imiphezulu yeetafile zekartz lolunye lolona khetho lubalaseleyo ngenxa yeempawu ezizodwa zale ndlela ye-quartz. Nge-veining eyahlukileyo kwityabha nganye, kunzima ukudibanisa ukuba bahambe xa bekwi-slabs ezininzi.
ucaphula malunga nendlela endimthanda ngayo
Ukuba ufumana nje isiqwenga esikhulu seCalacatta quartz kwaye uyinqumle ukuze uyenze imilo oyinqwenelayo, uya kufumana ukucoceka okukhulu.
Uninzi lweeClacatta Quartz slabs ziyafumaneka kuzo zombini i-2 cm kunye ne-3 cm slabs kunye nezinye iindlela esele zenziwe zokuyila kunye nokufaka ubhetyebhetye. Ubungqingqwa bunokwahluka ngokuya ngendawo ofumana kuyo amatye, kwaye unokutshintsha amaxabiso nawo.
I-quartz yeCalacatta yicocekile, imhlophe eqaqambileyo kwaye inombala othile we-vein eluhlaza okombala oluhlaza. I-veining ixhaphakile kwaye iyamangalisa. Ezinye iintlobo ezithile zeCalacatta zinemibala eyongezelelweyo ephoswe njengegolide kunye nebrown. Jonga imifanekiso engezantsi yokwahluka okudumileyo kweCalacatta quartz.
I-quartz yeCalacatta ibaleka malunga ne-60- $ 100 ngeenyawo zenyawo. Ngokusekwe kubukhulu kunye nohlobo elo xabiso lingahluka. Uhlobo ngalunye lweCalacatta quartz yahlukile enokuthi iqhube ixabiso, ngakumbi ukuba ujonga okuthile engqondweni.
Ukuzifumana ngokwamaqhekeza amakhulu kunokuba nzima (kwaye ke ngenxa yexabiso) ngamanye amaxesha ukuthenga kwiithayile endaweni yeslabs kunokuba sisindisi semali. ICalacatta Quartz ngokwayo ikwicala lomthengi ngokwawo nangona kunjalo, kungangcono ke ukuba ungene kwindawo yokuqala kwaye ufumane islabs esipheleleyo sokwenza umbono ngendawo eza kusetyenziswa kuyo.
Akunyanzelekanga ukuba ndikubone ngoku
Xa ucinga malunga nexabiso lezinto ezikhunjulwayo khumbula ukuba kufuneka kubekho imali eyongezelelweyo ecwangciselwe ukufakelwa (kubiza kakhulu ngokusekwe kwinqanaba lobunzima), kunye nakuphi na ukusikwa ekufuneka kwenziwe kwisilayidi.
Isilayidi esinye seCalacatta Quartz siqhele ukuba malunga ne-70 ukuya kwi-100 yeedola kubandakanya nentlawulo yokufaka. Oku kungahluka ngokobungakanani, imilo, indawo kunye nabathengisi. Ngamanye amaxesha umntu unokufuna ngaphezulu kwesilayiti esinye, esinokongeza ngokucacileyo kwiindleko, zihlala ziphindaphindwe, kuba kuthengwa islab eyongezelelweyo.
Ngelixa iCalacatta iluhlobo lwe-quartz uqobo, kukwakho namacandelwana eentlobo zeCalacatta quartz, umahluko omncinci kumbala kunye nomthamo. Phakathi kweepateni, umahluko omncinci womthunzi kunye nenani le-translucence kwisiqwenga ngasinye, kukho itoni yokhetho ukuze uyilo ngalunye lube neziqwenga zeCalacatta quartz. Ezinye zeentlobo ezaziwa kakhulu zeCalacatta quartz zidwelisiwe kwaye zichazwe apha ngezantsi.
I-quartz yegolide yeCalacatta inemvelaphi emhlophe eqaqambileyo, enefomathi yokuqaqamba okumnyama eqaqambe ngokungafaniyo, enomahluko omkhulu. Umahluko phakathi kwesiseko seCalacatta quartz kunye neCalacatta yegolide quartz kukudityaniswa kwegolide yegolide exutywe kunye negrays kwimvelaphi emhlophe. Oku kudala isiqwenga esahlukileyo kunye nendawo ephambili egxile kwigumbi.
ICalacatta yegolide ye-quartz ikhwaza ubunewunewu nobuhle, ingavumeli enye into ukuba inyuse ngaphezulu. Ngombala owongeziweyo nangona kunjalo, yenza ukhetho lwesitayile kunye nokulungelelanisa kancitshiswe ngakumbi kuneentlobo ze-quartz eziqhelekileyo.
ICalacatta quartz emhlophe sisiqwenga esimangalisayo samatye anemvelaphi emhlophe eqaqambileyo kunye nephethini ye-vein ebanzi ebabayo enika isitafile ukuziva okutofotofo. Le quartz, njengoko uninzi lwezinye iintlobo zenzayo, inikezela ngenkangeleko yendalo yeMacacatta yemabhile, kodwa kungekho nanye isilelo esiza nezinto zokusebenzela zemarble. I-quartz yeCalacatta yindawo ehlala ixesha elide kakhulu emsebenzini enamachaphaza amancinci kunye nokukrala okunganyangekiyo okwenza ukuba isebenze njengoko intle.
Igadi yomtshato ilokhwe umama womtshakazi
Imiphezulu yeetafile zeCalacatta Laza Quartz zibandakanya okumangalisayo, iphatheni enombala omdaka ngombala ejikelezayo kwimvelaphi emhlophe yelitye. Oku kukhangeleka kwendalo okufana nemarble. ICalacatta Laza quartz ilungile kuzo zombini iisetingi zangoku kunye nezakudala.
I-quartz yeCalacatta Classique ibandakanya imvelaphi eqaqambileyo, emhlophe ecocekileyo ngokukhanya okuqaqambileyo kodwa okuqaqambileyo. Olu hlobo lwe-quartz luza kwi-slabs ye-2 cm kunye ne-3 cm kwaye ine-finish egqityiweyo kuyo. Oku kuyinika umgangatho wolondolozo lwasimahla kunye nokubonakala okuphezulu kunye nokuphela. Ngethamsanqa inkangeleko ayinasiphelo njengoko inezinto ezinokuhlala ubomi bonke.
Iipaliti zeCalacatta Venice Quartz zinemvelaphi emhlophe efudumeleyo enika imvakalelo ethambileyo kwiitafile. Ukulinganisa i-marble yase-Italiyane enobuqili, kodwa ipateni ebanzi. Olu dibana lugcina izinto zokubala zingathathi hlangothi ngelixa zijolise kuyo nayiphi na ikhitshi.
I-quartz yeCalacatta Botanica ibandakanya imvelaphi emhlophe ethambileyo kunye nokukhanya okungwevu okukhanyayo. Le ndlela ilula inikezela ngenkangeleko entle enokusetyenziswa kwiindlela ezahlukeneyo zoyilo kunye neempawu zombala. Ukusuka kwi-sleek yanamhlanje ukuya kwi-marble yase-Itali engenasiphelo iCalacatta Botanica quartz ilungile kuyo nayiphi na into oyifunayo.
Imiphezulu yeetafile zeCalacatta Nuvo Quartz zenziwe ukuba zilingise iziqwenga zemabhile zeCalacatta. Banokubandakanya ububanzi, imithambo yegrey ebanzi ejikelezayo kwimvelaphi emhlophe yelitye. Ifana nemabhile, ezi slabs zeCalacatta Nuvo quartz zinomahluko kwisiqwenga ngasinye, sizenza zahluke kuzo zonke iinkalo.
I-Bianco Calacatta Quartz inemvelaphi emhlophe emhlophe enobungqingqwa obushushu, obufudumeleyo, obunombala omdaka ngombala omnyama ngombala. Ukuthamba, ukuziva ungeneka kule countertop kunika ukujonga okungaphelelwa lixesha kuyo yonke indawo edibanisa. Ngokubonakala kwemarble kodwa iimpawu zekartz, iBianco Calacatta quartz inzima kakhulu kwaye yomelele, kwaye kulula ukuyigcina nokukhathalela.
ICalacatta Classic Quartz iluhlobo oluhle kodwa olufihlakeleyo lweCalacatta quartz. Inemithambo efanayo engwevu kwimvelaphi emhlophe engathathi hlangothi ngohlobo lokujonga okuguqukayo kuyo, akukho nto imbi kakhulu. ICalacatta yeClassic ifana nendalo kwaye ayitsaleli ingqalelo engafunekiyo kuyo. Oku kubonelela ngenkangeleko engaphelelwa lixesha enokungena kwiindlela ezininzi.
iingoma zomama womtshato umdaniso womtshato
ICalacatta Leon quartz inemvelaphi emhlophe ekhanyayo ethambileyo, enendlela ethe gca yokuqaqamba emhlophe, ikhwaza ngokuthe ngqo imbonakalo yemarble. Ngokubonakala kwemarble kodwa iimpawu zekartz, iCarlacatta Leon quartz inzima kakhulu kwaye yomelele, kwaye kulula ukuyigcina nokukhathalela. Oku kunika ithuba lokusebenzisa le ndawo kwindawo ezininzi, kubandakanya izindlu zangasese, iikhitshi, amagumbi okutyela, njl.
ICalacatta Verona Quartz inemvelaphi emhlophe ethambileyo kunye nemithambo efihlakeleyo, efanayo nezinye iintlobo ezichazwe apha. ICalacatta Verona Quartz ibonelela ngobuhle bemarble kujongeka kunye neempawu zeStain-, germ-, kunye ne-resistant-resistant of quartz countertop.
ICalacatta Vicenza quartz inemvelaphi emhlophe ekhanyayo, kunye nokuqaqamba okuqaqambileyo okungwevu okukhazimlayo, phantse kujongeka ngokungathi yimithambo ebhabha ngaphezulu. ICalacatta Vicenza ifumaneka kuzo zombini i-2 cm kunye ne-3 cm slabs kunye nolunye ukhetho olukhethiweyo loyilo kunye nokufakwa kuguquko. I-Calacatta ilungile kwiindlela ezahlukeneyo zesitayile ukusuka kwinto yesiqhelo ukuya kule mihla.
ICalacatta quartz eyenye inezona mvelaphi zimsulwa kuzo zonke iintlobo zeCalacatta. ICalacatta Ultra ine-veine ethambileyo, ethambileyo yomgca, engenasiphelo kwaphela. Olu hlobo lweCalacatta lunika i-marble ukuba ibalekele imali yayo, ngakumbi ngenxa yokuqina kwayo, kunye ne-chip, ibala, kunye nokumelana nobushushu.
I-Calacatta Trevi quartz slabs iphefumlelwe yimabhile yokwenyani yase-Italiya. ICalacatta Trevi quartz inesimo esimhlophe esifudumeleyo, esimhlophe kunye nesilathisi. Njengoko i-quartz injalo, iCalacatta Trevi quartz inzima kakhulu kwaye yomelele, kwaye kulula ukuyigcina nokukhathalela.
I-quartz yaseCalacatta Roma ivela kwimigodi yase-Itali, eJamani nasePortugal. Inophawu lwemvelaphi emhlophe enemigca ekhanyayo engwevu kunye nomthamo kuyo yonke indawo. Ihlala isetyenziselwa imiphezulu yeetafile yasekhitshini kwaye ayikhuthazwa ukuba isetyenziswe kwiindawo zomlilo.
Kwenye igalari yemifanekiso enxulumene noko ndwendwela isikhokelo sethu Imiphezulu yeetafile zekartz zeCambria .
ubeko lwekhitshi oluvulekileyo
yintoni uxanduva lwabazali bomyeni?
imiyalezo yokukhumbula umtshato womyeni
ulungiselelwa njani ukutshata umntu
isipho somtshato somtshato oya kwindawo oya kuyo